Nhungamiro yevatangiri Kubva kuSemalt On Web Peji Kutamba
Data uye ruzivo pamusoro pewebhu zviri kukura zuva nezuva. Mazuva ano, vanhu vakawanda vanoshandisa Google senzira yekutanga yeruzivo, pasinei nokuti vari kutsvaga mhinduro pamusoro pebhizimisi kana kuedza kunzwisisa izwi idzva.
Nehuwandu hwemashoko anowanika pawebhu, inozarura mikana yakawanda yeDhina masayendisiti. Zvinosuruvarisa, zvizhinji zve data pawebhu hazvisi nyore nyore. Inoratidzwa nenzira isina kugadziridzwa inonzi HTML maitiro asina kukwanisika - us-24-150w. Nokudaro, zvinoda ruzivo uye unyanzvi hwesainzi wezvinyorwa kuti azvishandise.
Kushandura kweWebhu ndiyo nzira yekushandura dhiyabhorosi iri muhutomu hwemu HTML muhutano hwakarongeka hunogona kusvika nyore nyore uye hunoshandiswa. Inenge dzose mapurogiramu epurogiramu anogona kushandiswa pakutsvaga kwewebhu yakakodzera. Zvisinei, munyaya ino, tichave tichishandisa rurimi R.
Pane nzira dzakasiyana-siyana umo data inogona kuparadzirwa kubva pawebhu. Zvimwe zvezvinonyanya kuzivikanwa zvinosanganisira:
1. Vanhu Copy-Nyanya
Iyi inzira inononoka asi yakanyatsobudirira yekuchera data kubva pawebhu. Mune nzira iyi, munhu anoongorora dheyo pachake uye anoipikira kunzvimbo yekuchengetedza.
( 19) 2. Nhamba yekufananidza kuenzanisa
Iyi ndiyo imwe nzira iri nyore asi ine simba yekubudisa mashoko kubva pawebhu. )
Zvizhinji zvewebhu zvakadai se Twitter, Facebook, LinkedIn, nezvimwewo zvinokupa mavoti ehurumende kana ega ega anokwanisa kutumidzwa achishandisa magwaro anowanikwa kuti awane dhidhii nenzira yakatemwa.
Cherechedza kuti mamwe mapurogiramu anogona kuwana zvinyorwa zvine simba zvakagadzirwa neklayiti-side scripts. Zvinokwanisika kuisa mapeji muDOM muti unobva pane zvidzidzo zvaunogona kushandisa kuti uwane mamwe mapeji aya. )
Usati watanga webhuputi muR, iwe unofanirwa kuva neruzivo rwepamusoro paR. Kana uri wekutanga, pane mazhinji makuru makuru anogona kubatsira. Uyewo, unofanirwa kuva nezivo ye HTML neCSS. Zvisinei, kubva pane dzakawanda dhemasayendisiti hazvina kunyatsonzwisiswa nezivo yehutano hwe HTML neCSS, unogona kushandisa software yakazaruka seSelector Gadget.
Semuenzaniso, kana uri kutsvaga dhidhiro pawebsite ye IMDB yemafirimu zana anozivikanwa akabudiswa panguva yakatarwa, unofanira kutsvaga data inotevera kubva pawebsite: tsanangudzo, runtime, genre, kukosha, mavhoti , kuwana zvakakwana, mutungamiriri uye kukanda. Kana wapedza kuvhara data, unogona kuzviongorora nenzira dzakasiyana. Somuenzaniso, unogona kugadzira zviratidzo zvakawanda zvinonakidza. Iye zvino paunenge uine pfungwa yakawanda yekuti kudhonza kudarika chii, unogona kuita nzira yako kumativi ose!